တစ်နေ့တာ... (တဂ်ပို့စ်) ~ White Angel
3:43 PM အဖြူရောင်နတ်သမီး 14 comments
ညီမလေး Blackroze နဲ့ မောင်လေး အမောင် တို့ တဂ်ထားတဲ့ “တစ်နေ့တာ..” ဆိုတဲ့ ပို့စ်လေးကို ရေးပေးဖို့ နောက်ကျခဲ့တဲ့အတွက် တောင်းပန်ရင်း ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
+တစ်နေ့တာ စိတ်ရွှင်လန်းစေဖို့အတွက် “ကောင်းသောနိုးထခြင်း”ဆိုတဲ့ နိုးထခြင်းမျိုးနဲ့ နိုးထစေဖို့အတွက် အိပ်ယာထဲမှာ ၁၀မိနစ်လောက်နှပ်ပြီးမှ ပေါ့ပါးလွတ်လပ်စွာ အိပ်ယာပေါ်မှ ထတတ်တာ ကျမရဲ့အကျင့်တစ်ခုပါ။ အဲဒီလို စိတ်ကို ကြည်လင်စေဖို့ မျက်စိနှစ်လုံး ပွင့်တာနဲ့ ကုတင်ဘေးက ခုံပေါ်မှာ တင်ထားတဲ့ ကွန်ပျူတာကို ဖွင့်ပြီး Facebookရွာထဲကို အရင်မွှေပါတယ်။ :D
*မနက်စာကို ဘယ်လိုအစားအစာ စားရတာကြိုက်ပါသလဲ
+မနက်စာအတွက် အများဆုံးစားဖြစ်တာကတော့ Quick Food လို့ခေါ်တဲ့ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ်(သို့)ဘီစကစ်(သို့) ရယ်ဒီမိတ် မုန့်ဟင်းခါး(သို့) ခေါက်ဆွဲပြုတ်ရယ် မတ်ခွက်နဲ့အပြည့်ဖျော်ထားတဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ပါ။
+မပါမဖြစ်တဲ့ မတ်ခွက်အပြည့် ကော်ဖီတစ်ခွက်နဲ့ ပေါင်မုန့်ထောပတ်သုပ်။
+ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာဖွင့်ထားတဲ့ဆိုင်လေးတွေမှာ စားချင်ပါတယ်။
ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံမှာက တနင်္ဂနွေနေ့လို ရုံးပိတ်ရက်တွေမှာ ဆိုက်ပရပ်စ်နိုင်ငံသားများဟာ နေ့လည်စာကို အလေ့အကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့ အပြင်ထွက်စားလေ့ရှိကြပါတယ်။
+မြန်မာဟင်းတွေကတော့ ကိုယ်တိုင်ချက်စားနေကျမို့ အစားချင်ဆုံးဆိုတာ မရှိပါဘူး၊ တစ်ကယ်စားချင်နေတာကတော့ ကုလားမ လုပ်တဲ့ တိုရှည်ပါ၊ (ကုလားအစားအစာများကို ကျမ အလွန်ကြိုက်ပါတယ်)။
*အလုပ်မှာကော်ဖီ ဘယ်နှစ်ခွက် သောက်ပါသလဲ
+ဘိန်းစွဲသလို မသောက်ရင်မနေနိုင်တာကတော့ ကော်ဖီပါ။ ကော်ဖီထဲမှာ လူကိုActive ဖြစ်စေတဲ့ ကဖိန်းဓာတ်ပါတယ်လို့ စာတွေထဲမှာ ဖတ်ဖူးပေမယ့် အကျိုးသက်ရောက်မှု တစ်ကယ်ရှိ/မရှိဆိုတာကို ကျမ မသိပါ။ သို့သော် အလုပ်ထဲရောက်တာနဲ့ ကော်ဖီတစ်ခွက်ကို အရင်သောက်ပြီးမှ အလုပ်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ အတိအကျဖြေရမယ်ဆိုရင်တော့ (၁)ခွက်ပေါ့။
*ညနေစာစားရင်းနဲ့ အများဆုံးစဉ်းစားဖြစ်တတ်တဲ့ အကြောင်းအရာ
+အလုပ်ထဲမှာပဲ ညနေစာစားလေ့ရှိတာကြောင့် အလုပ်အကြောင်းပဲ စဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်၊ ကျမ အလုပ်က တာဝန်ကြီးတယ်၊ အလုပ်ထဲရောက်တာနဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံက ကျမကိုဆီးကြိုနေကျမို့ အလုပ်“စ”ချိန်နဲ့ အလုပ်သိမ်းချိန်တွေမှာ စဉ်းစားမိတာ အလုပ်အကြောင်းပါ။
+တစ်နေ့တာ လုပ်ငန်းတာဝန်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ မာန်အပြည့်၊ ဟန်အပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့ ကျမအတွက် အင်အားအတော်လျော့ပါးနေပြီပေါ့။ အဲဒီလိုအချိန်မှာ ကျမရဲ့အခန်းထဲရောက်လို့ ခံစားမိတာကတော့ “လွတ်လပ်ပေါ့ပါးခြင်း”နဲ့ယှဉ်တွဲနေတဲ့“ပင်ပမ်းနွမ်းနယ်ခြင်း”ဝေဒနာပါပဲ။
+ကျမအခန်းထဲရောက်တာနဲ့ ကွန်ပျူတာကို အရင်ဦးဆုံးဖွင့်ပါတယ်။
+အလှည့်ကျ ရေချိုးခန်းတန်းစီရင်း Email စစ်ပါတယ်၊ Facebook ဖွင့်ပါတယ်။ စာဖတ်ပါတယ်။
*တအားစိတ်ဓါတ်ကျလာတဲ့အခါမျိုး စိတ်အားငယ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ ဘာလုပ်တတ်သလဲ
+သေခြာပါတယ်..၊ မပြောလည်း သိတယ်ဟုတ်၊ ဘာပစ္စည်းဖြစ်မလဲ??????
+ဖေဖေ၊ မေမေနဲ့ ကျမ၊ (၃)ယောက်ပဲရှိတဲ့ မိသားစုလေးထဲမှာ အချစ်ရဆုံးသူလို့မေးရင် ဖေဖေ့ကို မေမေ့ထက်ပိုချစ်ပါတယ်၊
ဖေဖေက ကျမ ပူဆာသမျှအကုန်ဝယ်ပေးတယ်၊
မေမေကတော့ စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ စိစစ်နေတာနဲ့ပဲ လိုချင်တာ မရတာများပါတယ်။ အဲဒါက ငယ်ငယ်တုန်းက ခံစားချက်ပေါ့။သမီးတွေဟာ အဖေကို ပိုချစ်တတ်ကြသတဲ့။ သားတွေကတော့ အမေကိုပိုချစ်ကြတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
+အယုံကြည်ရဆုံးသူ..ဆိုတာ တစ်ကယ်တော့ ပြောရခက်ပါတယ်။
“စိတ်”ဆိုတာကလည်း အခက်သားလား၊ ချစ်ခင်နေကြတဲ့အချိန်မှာ ဆိုးတိုင်ပင် ကောင်းတိုင်ပင် သူငယ်ချင်းတွေရှိပေမယ့်၊ စိတ်အခန့်မသင့်လို့ မုန်းစိတ်ဝင်လာတဲ့အချိန်မှာ နောက်ကျောဓားနဲ့ထိုးတဲ့သူတွေလည်းရှိတာမို့ “အယုံကြည်ရဆုံးသူ”ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် အဖြေဟာ အခြေနေနဲ့ အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး ပြောင်းလဲတတ်ပါလိမ့်မယ်။
+လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သူငယ်ချင်းတွေထဲက စိတ်တူ တဲ့သူပေါ့။
+အဟေး။။။ ချစ်သူထက် ချစ်တယ်။
+တိတ်တိတ်လေး ဆုတောင်းထားတယ်.. မမေးနဲ့..ပြောဘူး..း)
အလုပ်ပြန်နောက်ကျတဲ့ကျမအတွက် အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ဟာ မနက်၁နာရီဖြစ်နေပါပြီ(မြန်မာပြည်စံတော်ချိန်ဆိုရင် မနက်၅နာရီ၄၅ပေါ့)။
အိမ်ပြန်ရောက်လို့ ခဏအနားယူပြီး ရေချိုးခန်းအလှည့်ကျဖို့စောင့်ရင်း E mailစစ်ခြင်း၊ Blog လည်ခြင်း၊ Facebookမှ သတင်း၊အတင်းများကို ဖတ်ပါတယ်။
အဲဒါတွေပြီးလို့ ကျမအိပ်တဲ့အချိန်ဟာ ဆိုက်ပရပ်စ်အချိန် မနက်၃နာရီဖြစ်နေပါပြီ။
မနက်၁၁နာရီမှာ ကျမ အိပ်ယာနိုးပါတယ်(အိပ်ချိန်၈နာရီအပြည့်အိပ်မှ ကျမ ခေါင်းကြည်တတ်လို့ပါ)။
မျက်နှာသစ်ပြီးလို့ မနက်စာစားပြီးချိန်မှာ အွန်လိုင်းခဏတက်ပါတယ်၊ နေ့လည်၁၂နာရီမှ ညနေ(၃)နာရီအထိ အခန်းတွင်းမှာ ဝန်ထမ်းများရဲ့အင်္ကျီများ၊ ကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံ ဆိုင်(၅)ဆိုင်ရဲ့လက်သုတ်ပုဝါများ၊ စားပွဲခင်းများ၊ အစရှိသည့် ဝန်ထမ်းအသုံးအဆောင်၊ စားသောက်ဆိုင်အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများကို ချုပ်လုပ်ရတာ ကျမရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်ပါ။ အခန်းတွင်းမှာ စက်ချုပ်ရတဲ့အတွက် ကွန်ပျူတာကို ကျမဖွင့်ထားပေမယ့် မအားပါဘူး။ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကျမရှိနေပေမယ့် ကျမအခန်းထဲမှာ စက်ချုပ်နေတာကို ခင်မင်တဲ့သူငယ်ချင်းများအားလုံးက သိကြပါတယ်။
ညနေ (၃)နာရီမှာ ဆိုင်က ကျမစားဖို့ ထမင်းနဲ့ဟင်း လာပို့ပါတယ်။ ထမင်းစားပြီး (၃)နာရီနဲ့(၄)နာရီကြား၊၁နာရီခန့် ကျမ အွန်လိုင်းတက်ပါတယ်။
ညနေ(၄)နာရီမှာ ရေချိုး အလှပြင်ပြီး ညနေ(၅)နာရီမှာ စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်ဆင်းရပါတယ်။
အဲဒါ ကျမရဲ့နေ့စဉ်လည်ပတ်နေတဲ့ ဘဝရဲ့တစ်နေ့တာ... အချိန်ဇယားပါပဲ။
မတ်လမှ စက်တင်ဘာလအတွင်း ပိတ်ရက်မရှိ အလုပ်လုပ်ရပါတယ်။
ရသင့်ရထိုက်တဲ့ ပိတ်ရက်များနဲ့ Holiday ရက်များကို ဆောင်းတွင်းဖြစ်တဲ့ အောက်တိုဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း (၁)ပတ်မှာ နားရက် (၃)ရက်နှုန်းဖြင့် ခွင့်ရက်များကို အကုန်ပြန်ပေးပါတယ်။
အဲဒီလိုနားရက်တွေမှာတောင် Special Function တွေရှိလာတဲ့အခါ ကုမ္ပဏီက ခေါ်ခေါ်ခိုင်းတတ်တာကြောင့် ကမ္ဘာ့အလုပ်အများဆုံးစာရင်းဝင်တွေထဲမှာ ကျမလည်းပါမည်ထင်ပါကြောင်း.. ဟာသနှော၍ “တစ်နေ့တာ...” ပို့စ်လေးကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်..။
တစ်နေ့တာပို့စ်လေး လာဖတ်သွားတယ် မမနတ်သမီး။ အရုပ်လေးတွေ ချစ်တတ်တာခြင်း တူနေပါရော။ အလုပ်ချိန်က ရှည်သားပဲနော်။ မမပင်ပန်းလား။ အစစ အဆင်ပြေပါစေရှင်။
အဲဒါလေး သဘောကျတယ်။ ကိုယ်တိုင်လဲ အဲဒီလို လုပ်နေကြဆိုတော့။
တခါတလေ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ တယောက်တည်း သွားထိုင်နေချင်တယ်။ တနေ့တာအလုပ်ကတော့ ဟူးးးးးးး
ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ တယောက်တည်း သွားထိုင်နေတတ်ပါတယ်..ကောင်းလိုက်တာ မမအိန်ဂျယ်ရေ..
ချစ်သူထက်ချစ်တဲ့ အရုပ်ကလေး ကံကောင်းလိုက်တာ...:):) အရုပ်လေးတောင် ဖြစ်ချင်မိသား...:D ပင်လယ်နဲ့ နိးတော့ ကောင်းတာပေါ့မမ ..ညီမလေးလည်း ထိုင်ချင်လို့..:P:P
ကျွန်တော်ကတော့အိပ်ယာထထခြင်း ရေအ၀သောက် ပြီး အီအီး ပါတာပဲ :D
ပင်လယ်ကမ်းစပ်တော့ သွားမထိုင်ရဲပေါင်ဗျာ တော်ကြာ ဆူနာမီနဲ့ တိုးနေမှာစိုးလို့...အဲဒါ အပြိုဂျီးတွေ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့နေရာဆိုတော့ ဦးဟန်ကြည်တို့နဲ့ မဆိုင်း)
ဟရေးးး. အာမားးနော်... ကုလားစာကို ကြိုက်တယ်နော်... မပြောမရှိနဲ့နော်.. ကုလားအစားအစာက... မဆလာနံ့ နံသနော်... ဟိဟိ။။ တစ်နေ့တာ တဂ်ပို့စ်လေး ဖတ်သွားပါသည်။။
ကိုယ်နေရတဲ့ဘ၀မှာ ကိုယ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်အပေါ် ကျေနပ်အောင်ကြိုးစားရင်းနဲ့ပဲ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရတာမဟုတ်လား ညီမငယ်။ သူတို့ဥပဒေကတော့ ဘယ်လိုရှိတယ်မသိဘူး။ စားသောက်ဆိုင်ဆိုတော့ နားရက်မရှိတာထက်စာရင် အလှည့်ကျနားရတာမျိုးကတော့ ပိုကောင်းပါတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတောင် အဲဒီစနစ်ရှိတယ်။ တစ်နေ့တာကို လေ့လာသွားပါတယ်။
မမရဲ့တနေ့တာက အချိန်ကိုစိနေတာဘဲ စက်လဲချုပ်ရသေးတယ်ပင်ပန်းထှာနော်း(((